Tallaabada Your ugu horeysay on Jidka iimaanka.
ma wuxuu ku saabsan yahay "dareenka" laakiin waxa Kitaabka Quduuska ah run ahaantii wuxuu leeyahay! aad soo shirtagi doono sharcigaan fudud ka dibna waxa uu si fiican u tegi doonaa, waayo, Jid ka mid ah iimaanka.
On iimaanka socodka, waxaad la kulmi kartaa dib u dhac kala duwan. Markaas waxaa muhiim ah inuu ku soo shirtagi in Ciise. Haddii aad samayn in, waxa ay tegi doonaa jidka iyo iimaanka noqonayaa mid sii xoogaysta.
Waxaa jira laba nooc oo dadka marka tijaabooyin iyo dhibaatooyin. Mid ka mid ah ka cararaya Ciise. The labaad oo Ciise u cararaan. Lama soo cararaya fog Ciise iyo iska of iimaan ka dhicin. Halkee halkii ka cararaya in ay Ciise oo xoog badan oo ay iimaanka.
Marka ilmuhu ku baran doontaa in ay socdaan, ayuu gabi doono. Waxa uu ku dhici doono iyo degaan. Laakiin weli waxa uu noqon doonaa madax adag, u hesho ilaa iyo mar kale isku day. Xeerkani wuxuu adiga muhiim kuu ah. Waxaa laga yaabaa in aad on Jidka iimaanka. Ma waxaa been ma sheego oo ahaa Quusta. Kac, dambidhaafna waydiista iyo guurto on la Ciise.
Sida Mu'min ah oo cusub oo aad leedahay sida xaqiiqada ah dhawr waxyaalood oo uu boorsooyinka aan wanaagsanayn. Marka tan la eego, waxaa laga dhan xaq doonaa. Waa in aad raacdaa Ciise iyo isaga la socon. Waxyaabaha aan ku fiican yihiin in aad boorsooyinka wuxuu kaa caawin doona inaad in laga takhaluso marka waxa la joogaa wakhtigii. Wax walba ma baabi'i mar marka aad aqbalay Ciise iyo ka ahaa badbaadiyey, laakiin waxa ay waqti baabi'i doontaa. Waa in erayga kale yeedhay quduusnaan.
Waxaan sidoo kale doonayaa in la xuso in macnaha guud in ay tahay mid aad u caadi ah in rumaystayaasha cusub si degdeg ah ama goor dambe ka heli doontaa weerar shaki culus. Haa, waa ma aha oo kaliya caadi ah, laakiin waxaa mar walba sidaas! Waxaa laga yaabaa in hore, waxaa laga yaabaa in mar dambe soo, laakiin waxa ay Doono!
Weerarka shaki tani waxay noqon doontaa dhamaadka haddii aynu nahay in ay sii wadaan in aad raacdo Ciise ama u tag iyada nolosha jirka daafaca. Haddii aad doorato in Ciise yahay iimaanka in ay xoog iyo kuwa Samra!
ilmuhu wuxuu dhiman doonaa haddii uusan cunto aan helin. Sidaas oo kale waa in aad la. Waxaad u baahan tahay cunto ruuxa ah. Ha aad u hesho, aad noqon doonaa ruuxa nafaqo-xumo hayso oo ugu danbeyn ku dhiman ruuxa ee rumaysadka.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa cunto by lagu adeegi jireen! Waxa aad ka heli by in kaniisad Christian in dadka ku wacdiyo erayga Ilaah iyo Ciise kitaabiga ah oo dhan ka socday! Waxaan ku talinaynaa in aad la xiriirto kaniisad ku taal degaanka aad ku nooshahay. Ha aad kaniisadda aadaa si aan noqon kartaa ku faraxsan yahay inuu kaa caawiyo la xiriir in. Ama, haddii aad u jeesanaynaa dadka Christian a badbaadi kuwa aad ku kalsoon tahay. Sidaas daraaddeed, uu dhab ahaan ku caawin kara.
Sidee ayaad ku ogaan haddii Golaha wuxuu xaq u leeyahay in uu barto? - qiran in Ciise yahay Rabbiga, oo aad uma baahna noqon welwelsan tahay.
Oo waxaan ula jeedaa in aad free afkaaga Ciise tahay. Ciise ayaa aad iyo ayuu badbaadiyey
doonayaan in ay leeyihiin xidhiidh buu kula yeelanayaa. Waxa uu doonayaa inuu la hadlo adiga iyo aad u hesho in ay la hadlaan isaga. Tani waa muhiim.
Haddaad jeceshihiin qof, aad samayn dabcan ma sameeyaan dadaal in aad la hadasho qof in. In si la mid ah waa la Ciise. Uma baahnid in aad si aad cadaadin ama xiisad kasta oo muruqyada diinta. No, waxa uu ahaa dabiiciga ah. La hadal isaga maalin kasta. Waxaad dhahdaa in aad leedahay oo waqti la qaato. In uu jecel yahay.
Waxaan kor u ma qaadan karaan si fiican oo dhan qarsoon salaadda halkan, laakiin waxaan doonayaa in aad dhiiri la hal shay: Ilaah waxa uu rabaa in aad si ay u tukadaan. Waxa uu ku baaqay in this dhowr jeer in Kitaabka Quduuska ah.
In cutubka 21 iyo aayadda 22, Ciise ayaa sheegay in this in Injiilka Matthew:
"Wax kasta oo aad tukasho ku baridaan waxaad yeelan doontaan, sida aad u malaynayso."
Markaasaa Ciise ku yidhi, ka dibna halkan aad jawaabaha ka heli kartaa in ay salaadda ku saabsan wax kasta oo aad weydiiso!
Waxaad tukan karin in Ciise, laakiin Ciise ayaa sidoo kale ku dhiiri Aabbahaan u si toos ah baryayaaye magaca Ciise. Sida yaboohay jawaabta salaadda! ballan noocan oo kale ah, Ciise ayaa sheegay in John cutubka 16 iyo aayadda 23:
"Oo maalintaas waxaad i waydiisan maayo wax. Aamiin, aamiin, waxaan idinku leeyahay, Wax alla wixii aad weyddiisataan Aabbaha magacayga ku, isna wuxuu idin siin doonaa ".
Ha iloobin in aad Ilaah ugu mahad naqayaa in uu ayaa ku badbaadiyey. Mahad naqa, waayo, wuxuu Ciise kuu sameeyey. In uu dhintay oo la Soo Bixin. In uu nool yahay maanta oo uu dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin ayaa. markaas
tani waa dhab aad iyo aad iimaanka noqonayaa mid sii xoogaysta.
Marka waa inaad weydiisaa? Jawaabta waxaad ka heli Kitaabka Quduuska ah ee First Tesaloniika cutubka 5 iyo aayadda 17:
"Incessantly soo ducee."
In Falimaha Rasuullada cutubka 2 iyo aayadda 38 Peter jawaab dadka waxa ay samayn lahayd:
"Butros ayaa u jawaabay," Toobad keena oo lagu baabtiiso magaca Ciise Masiix si dembiyadiinna loo cafiyo. Oo waxaad heli doontaan Ruuxa Quduuska ah sida hadiyad. ' "
Baabtiisku waa qirasho deegaanka in aad hadda ka tirsan Ciise. Waxaad baabtiisay Ciise Masiix dhexdiisa, mar walba isagaa iska leh! Baabtiisku waa calaamad in aad hadda ka qoomamooday inuu Ilaah.
In Mark cutubka 16 iyo aayadda 16, Ciise ayaa yidhi:
"Ku alla kii rumaysta oo la baabtiiso waa badbaadi doonaa, laakiin kii aan rumaysanin waa la xukumi doonaa."
Lagu baabtiiso Ruuxa!
Aqbala Ruuxa Quduuska ah sida hadiyad! Talaabadani waxay inaan hore u taabtay on. Waxaad u baahan tahay awood ay ku noolaadaan sida isagoo Masiixi ah oo sameeyo wixii Ciise ayaa ku amray. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa caawimo aad socod ah maalin kasta ula Ciise.
John cutubka 14 iyo aayaadkiisa 16-17, Ciise ayaa sheegay in this:
Markaasaa Saa'uul, Paul dambe la odhan jiray, ayaa la badbaadiyey, ayuu isla markiiba bilaabay in laga marag furo oo u sheeg wax Ciise ku saabsan. Taa awgeed of this, ayuu awood dheeraad ah. Waxaad ka akhrisan kartaa in Acts cutubka 9 iyo aayadda 22:
"Laakiin Sawlos badan iyo ka xoog badan, iyo Yuhuuddii ah oo ku noolaa magaalada Dimishiq, sida uu cadeeyay in Ciise yahay Masiixa noqday."
Ha ka xishoon ee Ciise. Marka aad u istaagaan aad aaminsan tahay, dadka u fiirsan doonaa adiga. Waxaad rumoobay by Ciise.
"Waayo, waxa qalbigiisa waxaa ka buuxda, afku wuxuu ku hadlaa."
Ciise waxa uu odhanayaa in Luke cutubka lixaad ee aayadda 45. Haddii ay tahay wax in aynu nahay in-dunida ka mid ah sida kubada cagta, si aan wax dhib ah kuma hadalka ku saabsan saaxiibada our. Ma sinaba ku dadaali doonaan. Waxa kaliya qubanayo in. Haddaba, dabcan, Ciise nolosheena bedelay. Waa in aynu u sheeg wax isaga ku saabsan in ay dadka kale?
Qabo on Ciise!
Wax kastoo dhaca, hay on Ciise! Ha u ogolaan wax aad u hesho inaad isaga tago. Isagu waa waxa ugu fiican in uu kugu dhacay!
aad la Ciise dhegi doono ilaa dhamaadka aad, waxaad ka heli doontaa Li vets taaj jannada! Ciise waxa uu odhanayaa Muujintii 3 iyo aayadda 11:
"Waxaan ugu dhakhsaha badan doono. Qabo wixii aad qabto, si aan ninna taajkaaga kaaga qaadin. "
Oo kulli intaas oo jaranjarro toddoba tallaabo ah waa uun bilowga. Tani waa marka ay dhacdo:
- la Ciise lugaynta ayaa bilaabay!
Vecka 31, måndag 2 augusti 2021 kl. 17:39